Electric Scooters KUONA ZVAKAWANDA
Electric BIKES KUONA ZVAKAWANDA
SKATEBOARDS KUONA ZVAKAWANDA
HOVERBOARDS KUONA ZVAKAWANDA
ELECTRIC MOTORCYCLES KUONA ZVAKAWANDA
ACCESSORIES KUONA ZVAKAWANDA
Somunhu itsva pedaling mhando yemagetsi sikuta, UWITGO S5 vakagamuchira ichangobva kugadzirwa yokuti rwendo kudzora michina, iro zvinowanzoshandiswa motokari, saka vanokwanisa chitiviri pasi uye sikuta achauya kuva yavose sezvavakatarirwa nokukurumidza mamiriro. Kunze kwezvo, akashongedzerwa ane nzira itsva rwendo kudzora App, izvo zvinoita zvikuru akangwara. Ona akundwa zvimwe zvinhu.
Shock Absorção de Água For Comfort
UWITGO S6 ndiye hachizi itsva yemagetsi sikuta kuti atambudzwe dzakakwirira kutsungirira mabhiza vanozvishandisa. zvakagadzirwa ichi revatema dzakakwirira simba vanokwanisa bhatiri, izvo zvinogona nechokwadi Kuda kure anogona kusvika kuna 70Km. Kwakavakirwa ergonomic kugadzira pfungwa, reinvent magadzirirwe chigaro bhegi asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka, izvo zvinogona kusunungura vanoshandisa 'kuneta uye kuwedzera zvakaitika akatasva sikuta. Ona akundwa zvimwe zvinhu.
Sezvo muenzaniso Yokudzidza, UWITGO A5 riri kupenya uye duku. Aluminum chiwanikwa kana kabhoni internet muviri zvinhu zvinogona akatsaura parutivi vatengi. Uremu aruminiyamu chiwanikwa sikuta ndiye 7.5kg, uye muviri kurema kabhoni faibha ndiyo chete 6.3kg. Zviri nyore kuti peta, nyore kutakura, uye zvakakodzera chaizvo kuti nzendo pfupi. Ona akundwa zvimwe zvinhu.
Aluminum chiwanikwa & Carbon Fiber
The UWITGO CF1 nemaonero magnesium chiwanikwa sezvo muviri wayo, yaiva chiedza uremu uye simba mune simba, ichi zvinoita zvinonyatsorehwa kurema bhasikoro 30% kuvatumwa vamwe market.The rose bhasikoro pasina nomoto, izvo zvinoita pemvura zvimwe kusimba. Vanobvuma Ultra dzakatetepa brushless injini, asingasviki 5% simba kurasikirwa, nesimba rakawanda rokuponesa uye kuderedza kuneta panguva mabhiza.
Motorow-Tech anogara achiteerera guru utsanzi, unhu zvakanaka uye vatengi mabasa. Professional nokuti dzemagetsi Scooters, e-bikes, Skateboards uye hoverboards.
Sign up redu USN Life mugwaronhau